Dubai C-Level ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်များ
ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့မသာဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသည်ယခု ကူညီခြင်းမန်နေဂျာယူအေအီး၌ထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းမန်နေဂျာများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့တပြင်လုံးကိုလမ်းညွှန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိသည်။ ဒါကြောင့် သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ရှာနေလျှင်။ အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များကြည့်ရှိသည်, အကောင်းဆုံးနေရာဘယ်မှာမှထွက်ရှာတွေ့ ပြည်ပမှာအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ.
ငါတို့သည်သင်တို့ယူအေအီးအတွက်ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အချရေးထားပြီ။ နှင့်သင်တန်း၏, အကောင်းဆုံးကိုသူများဖြစ်ကြ၏ CEO ဖြစ်သူသို့မဟုတ်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလမ်းညွှန်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ expatriates ။ သို့သော်ငြားလည်း, ကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်ပါသလဲ။ အဘယ်သို့သောဤအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် ?. ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုဘူး။ သငျသညျကိုအောကျတှငျအခြို့သောကောင်းသောကုမ္ပဏီများသည်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သူတို့ကဒူဘိုင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များရှိခြင်းနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှစကားပြောယေဘုယျအားဖြင့်ရှာဖွေနေသည် သင်ယူအေအီးအတွက်အကြီးတန်းမန်နေဂျာဖြစ်လာကူညီ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သူတို့စဉ်းစားနေကြတာပိုမြန်မယ့်အလုပ်ရတဲ့အတှကျအပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေနေကြသည်။ ဒီလမ်းညွှန်နှင့်အတူ, သငျသညျလိမ့်မည် စုဆောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အကောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ။ ယခုအချိန်တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အထိပ်ကိုဦးတည်ရာ။ အထူးသဖြင့် MBA ဘွဲ့ရနှင့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရေးနှင့်အတူကောင်းစွာပညာတတ်အမှုဆောင်အရာရှိအတူ။ ဒီတော့ဘာကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ သင်တို့သည်ငါတို့၏လမ်းညွှန်နှင့်အတူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အမြဲပိုကောင်းတဲ့ပိုမြင့်အနေအထားရှိခြင်း ?. အဆိုပါစီအီးအိုရာထူးကိုတစ်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါသည်မဟုတျဘဲအလုပ်။ ဒါကဆက်ဆက်အကြီးတန်းမန်နေဂျာသို့မဟုတ်မဖြစ်မယ့်ဆွေးနွေးမှုရဲ့ ?. အလယ်တန်းအဆင့်တွင်မန်နေဂျာအများစုဟာရှိမရှိဆုံးဖြတ် အကြီးတန်းမန်နေဂျာရာထူးကို leve မှာအလုပ်လိုက်စားl ။ အဆိုပါ CEO ဖြစ်သူအလုပ်အကိုင်များ MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူလူအဘို့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့နှင့်အတူသူတို့အဘို့ကောင်းပါတယ်။ ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီလို့ပဲ။ ကျိန်းသေအားလုံးသူတို့ထဲကတစ်ဦး CEO ဖြစ်သူရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလတ်စားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပိုပြီးအကြီးတန်းမန်နေဂျာမျှော်လင့်။ အဘယ်သူမျှမစကွဝဠာရှိပါတယ် ဒီဒူဘိုင်းဘလော့ဂ်အတွက်အမှန်တရားနှင့်လူများကအကောင်းဆုံးကိုခေါင်းဆောင်မည်သူဖြစ်မည်ကိုသိကြဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအတော်ကြာပြည်တော်ပြန်သုတေသနပြု စစ်ဆေး-in ကိုဒူဘိုင်းတစ်ဦးက CEO လစာ။ ပိုကြီးတဲ့လစာအမြဲပိုကောင်းဖြစ်ပါသည် ?. သငျသညျဆက်ဆက်ကရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းမှကြွလာသောအခါခဲ့ခံရဖို့ဆှေးနှေးလုပ်ပေးကတည်းက၏သင်တန်းက ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အလတ်စားအဖှဲ့အစညျးမှာအလုပ်လိုက်စား။ အဆိုပါ CEO ဖြစ်သူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, ဤအမှုကိုပြုသောရစီမံခန့်ခွဲလူများထက်နည်း 5% ရောက်ရှိရန်ခဲယဉ်းသည်။
စီအီးအိုရာထူးကိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစကွဝဠာအမှန်တရားရှိပါသည်။ ထိုအရှေးခယျြဖြစ်စေရန်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ် သူနာပြုဝန်ထမ်းများထံမှအကြီးတန်းအဆင့်အထိတက်။ အလုပ်၏ရှည်လျားသောနာရီ, အထူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးထောက်လှမ်းရေးလိုအပ်။ ဒါကြောင့်မရတိုင်းလူတစ်ယောက်အကြီးတန်းမန်နေဂျာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်လျှင် ရေတွင်းတစ်တွင်း-တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖုံးစာတစ်စောင်ရှိခြင်း။ ဒီထူးခြားတဲ့အနေအထားအဘို့အလိုရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါတယ်။ လူအများ၏အများစုမှာအလယ်မန်နေဂျာရဲ့အဆင့်ဆင့်မှတက်ရတဲ့နေကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက် No.1 စီမံခန့်ခွဲမှုဂျော့အပြုသဘော
အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, အဖြစ်မှန်အတွက်အများအားဖြင့်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်း၌ရှိကြ၏ အဘူဒါဘီကနေဒူဘိုင်းမှ။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုနေတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ တိုးမြှင့်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့်, အလယ်မန်နေဂျာ။ အကြီးတန်းမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်ရယူခြင်း။ ဤရွေ့ကား, သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုကြီးတဲ့တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့မန်နေဂျာထူးခြားတဲ့ရရှိမှု လုံခြုံရေးအလုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာအားသာချက်များနှင့်အခွင့်အရေး.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအသေးစိတ်ရှိခြင်း အယ်လ်ဂျီးရီးယားကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လမ်းညွှန်။ ကျနော်တို့ကမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လိုက်ရှာအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်အနည်းငယ်လက္ခဏာထားရှိပါပြီ အကြီးတန်းမန်နေဂျာရာထူးကိုအတွက်။ ဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အဓိကလက္ခဏာများမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်အတွေ့အကြုံလာပြီ။ သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကောင်းအနာဂတ်တွင်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေဘို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလက္ခဏာကောင်းသောလုပ်ခဖြစ်ကြသည်။ ထိုကောင်းမွန်သောသင်တန်းများနှင့်ပို တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ကောင်းစွာ positioned ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်။ သငျသညျအလုပျမြိုးကိုရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်ကဆုကြေးငွေတွေအများကြီးလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦးက CEO အဖြစ်, သငျသညျအလုပျ၏ရှည်လျားသောနာရီကိုတွေ့လိမ့်မည် သင်မူကား, ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုစီမံနိုင်သည်။ အဖြစ်နေရာလွတ်ထိုကဲ့သို့သောအခြေခံအလုပ်အကိုင်များမှသည် ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထိ ယူအေအီးအတွက် MBA ဘွဲ့ရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတစ်ဦး s ကို Manager ကိုရနိုင်ပါလိမ့်မည်သူတို့ကိုအားလုံး။
ဒူဘိုင်းအတွက်မန်နေဂျာအဖြစ် No.2 ခေါင်းဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံ
ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီဝင်ရောက်, အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းလေဆိပ်အလုပ်အကိုင်များ။ ကျိန်းသေအချိန်စမ်းသပ်မှုတားတော်မူကြောင်းကိုကြီးမားတဲ့အလုပ်လုပ်စက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ တစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ရရန် ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ ဒါဟာအချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ် အသစ်ကပြည်တော်ပြန်ကိုလမ်းညွှန်။ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်များအများစုဟာများသောအားဖြင့်တစ်ဦးရှေ့တော်၌အချိန်ကြာမြင့်စွာထူထောင်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်မန်နေဂျာဖြစ်လာ၏နိုင်ရန်အတွက်။ သင်ကသတ်မှတ်ချက်အချို့ကိုရောက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်သင့်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်အတိအကျအရာကိုသိရန်သင့်အား enable သောအရာ, သင်သည်သင်၏ဌာနသို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း fit နိုငျပုံ နှင့်ပရိုမိုးရှင်းများအတွက်သိသာလမ်းကြောင်းနှင့်အဖြစ်မကြာမီသငျသညျတံခါးကိုမှတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်။ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဤမျိုးလူတိုင်းအတွက်ညာဘက်လမ်းကြောင်းမပေးပေမဲ့, သင်တစ်ဦးအလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တိုးဘို့တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုတိုးချဲ့အသိနှင့်အတူရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်နှင့်စနစ်တကျလမ်းကြောင်း, ထို့နောက် ပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ လူတွေတွင်ဤရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ကျွမ်းကျင်သူများ, အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ယခုအခါဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ သငျသညျကျိန်းသေတဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ။
ယူအေအီးအတွက် Manager ကိုဖြစ်လာခြင်း၏ No.3 အကျိုးကျေးဇူးများ
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, အပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာလေ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ငွေမြှင့်။ ဒါကြောင့်အသစ်ကအလယ်တန်းအဆင့်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ အဓိက မန်နေဂျာဖြစ်လာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ယူအေအီးနိုင်ငံတကာထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးအာမခံအဖြစ်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးနေကြတယ်လို့ပဲ။ အများကြီးတိုးချဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားပြည်တွင်းရေး အသစ်သောလူတို့အဘို့လေ့ကျင့်ရေး.
အကြီးတန်းမန်နေဂျာအဖြစ်, သင်လိမ့်မည် တစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်သို့မဟုတ် Uber လက်ခံရရှိ။ ကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးဘတ်ဂျက်ထက်ပိုမိုနဲ့တခြားအကျိုးခံစားခွင့်။ ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်မကြာခဏသေးငယ်ကုမ္ပဏီတွေထက်ပိုကြီးတဲ့ဝင်ငွေရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းကအောင်စိတ်ကို၌ဤအတူဒါ အသစ်ကန်ထမ်းများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တို့အဘို့အဆပ်ဖို့မတတ်နိုင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး အကျိုးခံစားခွင့် packages များတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
သင်သည်သင်၏အနေအထားကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမစတင်သောအခါအများ၏သင်တန်း, ဒီကိစ္စရပ်များကိုသာ။ ရရှိနိုင်ပါအများကြီးရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းမန်နေဂျာများအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်။ မည်သို့ပင်အဘယျသို့ကုမ္ပဏီနှင့်ပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးသောအရာကိုအနေအထားသင်၌အဘို့အသွားတက်အဆုံးသတ်၏ ကို C-Level အလုပ်အကိုင်များအဘို့သင့်ဘဝ။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်မန်နေဂျာကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သေချာဘို့ဥပမာ, တခြားနေရာတွေမှာအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကာတာနိုင်ပါ။ သငျသညျဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီရှိအလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းကဒါ။ အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီးကိုသင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းပါလိမ့်မည်.
အလုပ်ရှာဖွေရေးပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် No.4 ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေ
သင့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာကြီးမားကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်တိကျတဲ့ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်နေစဉ်။ တစ်ဦး CEO ဖြစ်သူသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာအဖြစ်အလုပ်ရှာဖွေခြင်း အချိန်ကြာမည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ကစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိကနေရာထူးပြောင်းလဲပစ်ရန်အများကြီးပိုလွယ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အလယ်မန်နေဂျာအများစုမှရှာဖွေနေ အလုပ်သစ်ဒေသများစူးစမ်း လုံးဝကုမ္ပဏီထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်ကအလုပ်သမားသကဲ့သို့သင်တို့အများကြီးပိုရပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ချေ.
တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ စီအီးအိုသငျသညျထို့နောက်စစ်ဆင်ရေးတခုစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်ခြင်းမှအရောင်းအလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်ခြင်းကနေသွားနိုင်ပါတယ် C- အဆင့်အလုပ်အကိုင်များညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်ရောက်ရှိ။ သို့မဟုတ်ပင်သင်ကဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအဖြစ်ပယ်စတင်ဖွင့်ရနိုင် အကြီးတန်း marketer အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ သင်ဆဲတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်လိုက်ရှာဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနိမ့်ရာထူးခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကွောငျ့သငျသညျချင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်လှည့်ပတ်ကြာမြင့်မည် ရောက်ရှိဖို့နိမ့်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်း။ သငျသညျပြီးသားကောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြပါလျှင်ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေတစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရာထူးတိုးတဲ့ထက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ဒါကအကောင်းဆုံးမန်နေဂျာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ရှိပါတယ်တဦးတည်းအရာဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရိုးရှင်းသောတာဝန်များကိုထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နေ အားလုံးနေရောင်ခြည်နှင့် Rainbow မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်ရှိခြင်းက start-up, ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်။ ဥပမာ, သင်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီရွှေ့ကတည်းက တစ်ဦးက start-up, အနေအထားကိုတက်ရာမှကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သငျသညျကုမ္ပဏီတိုးဘယ်လောက်တစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဦးစီးဌာန၏တိုးတက်မှုကဘာလဲ? နှင့်သင့်ဝန်ထမ်းများလတိုင်းအောင်ပင်ဘယ်လောက်။
သင်တို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်စေခြင်းငှါနေစဉ် ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းမှာရ။ သင်တို့သည်ဤအသေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပင်စတင်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်အကျိုးတူရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကုမ္ပဏီများသည်။ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာ Angel.co ဖြစ်သကဲ့သို့ Startup စာမျက်နှာကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်ရတဲ့အတှကျ။ ဒါကကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် !.
No.6 ကို C-အဆင့်အပြောင်းအလဲများတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပျက်
C-အဆင့်အလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်လာမျှော်လင့် ?. ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကောင်းလှ၏။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အလယ်တန်းအဆင့်ကိုမှ ကို C-Level ရှည်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကို C-အဆင့်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ကြောင့်, အပြောင်းအလဲများကိုစူပါရှည်လျားများမှာ။ သငျသညျအခြို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များ3နှစ်အချိန်အထိယူပြီးနေကြတယ်, စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တောင်မှဒူဘိုင်းအချို့ကုမ္ပဏီများနှင့်။ သို့တိုင်ရှည်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ရှေ့ဆက်စတင်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများသို့မဟုတ်ဒေသခံအလုပ်သမားတွေအတွက် ယူအေအီးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မှာ။
သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ကုမ္ပဏီအသစ်ကအတွေးအခေါ်များမှဖွင့်ရင်တောင်။ သို့တိုင်, သငျသညျရေရှည်ရည်မှန်းချက်များရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလွန် ကောင်းသောတိုးတက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမော်ဒယ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ HR ဒါရိုက်တာပျဉ်ပြားဌာနလာအောင်။ အသစ်တစ်ခုမဟာဗျူဟာပေါ်တွင်သင်ယူသင်တို့နှင့်အတူအတက်လိုက်နာပါ။ နှင့်သင့်အနေအထားပြောင်းလဲသွား ကို C-အဆင့်အလုပ်အမှုဆောင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုရာထူးအသစ်တခုမြှင့်တင်ရေးအချိန်အများကြီးယူနိုင်ပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများ၏အတော်များများက ကုမ္ပဏီအပေါ်၎င်းတို့၏အမှတ်အသားစွန့်ခွာချင်လိမ့်မယ်။ ဤအချိန်တွေအများကြီးယူပြီးဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်သူတို့5နှစ်ပေါင်းအထိနိမ့်ဆုံး7များအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သို့သော်ဤတန်ခိုးကြီးခြင်း ပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ် ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းထက်သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူ။ သင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့စဉ်ကတည်းကကြောင့်ပြုမိသောအရာတို့ကိုရတဲ့၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းရှိလိမ့်မည်ဟုမှတ်မိဖို့ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ရုံသင်သည်တတ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအရှိန်မြှင့်ရန် ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်ရှာ.
No.7 မန်နေဂျာများ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုသြဇာလွှမ်းမိုး
ကောင်းပြီ, မန်နေဂျာများကအမြဲသြဇာဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်။ သင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံနေချိန်တွင် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအပြုသဘောကလူ။ အခြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျိန်းသေသင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှု thru get ကူညီပေးသည်။ အဓိကပြဿနာကသင့်ကြောင်း အောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု။ သင်ကအကောင်းအဆင့်အတွက်အလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာစောင့်ရှောက်မည်ကိုမည်သို့ခက်ခဲကိုသိရတာပါ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ဒူဘိုင်း၌ရှိသော Manager ကိုဖွစျစနေိုမဟုတ် CEO ဖြစ်သူအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့အသင်းနှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်အချို့လူများက။ ထိုသူတို့ကကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းပေးဆောင်နေကြပါတယ်။ သဘောထားတွေဒီလိုမျိုးကြောင့်, သင့်ရဲ့လုပ်သားအင်အား၏အရည်အသွေးချတတ်၏.
သင်တစ်ဦးဆိုးသဘောထားကိုရှိခြင်းကြသူလူတို့နှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်စဉ်ကတည်းက။ ကျိန်းသေပိုပြီးနာရီမျှအမှု၌ထား ဘယ်လောက်ခဲယဉ်းသငျသညျအလုပ်မလုပ်။ သင်တို့မူကား, ဒူဘိုင်းအတွက်မန်နေဂျာတစ်ဦးအဖြစ်သငျသညျတခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာနှင့်သင့်ကံကြမ္မာကိုပိုင်ဆိုင်ထားဖို့လိုပါမယ်။ ကျိန်းသေသောအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် ကုမ္ပဏီအတွင်းတက်ရွေ့လျားသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးအစီရင်ခံစာကိုစုသိမ်း။ ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောကြောင့်သူတို့ကိုအလုပ်ကျင့်ဝတ်များနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကိုရယူပါ။ သေချာသည်, သင်သည်သင်၏အိမ်စာကျင့်ကိုကျင့်လျှင်။ သင့်ရဲ့ကြီးကြပ်အောက်မှာသင့်ရဲ့အဖွဲ့သို့မဟုတ်ဦးစီးဌာန။ မည်သည့်အချက်မှာသငျသညျခေါ်ခဲ့သငျသညျအဘို့ပေါ်ထွန်းစေနှင့်မည်မဟုတ်.
ရရှိနိုင်ပါအများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ လွှမ်းမိုးကျိန်းသေသငျသညျကွီးစှာသောအလုပ်ဆင်းသက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုစီမံခန့်ခွဲအဖြစ်မှန်၌တည်ရှိ၏ အားလုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းကိုအခြားသူတစ်ဦးကိုသင်ငှားရမ်းရန်.
ok ရဲ့, ဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကပြီးအောင်ကြကုန်အံ့။ သူတို့ကကိုရှာဖွေကြောင်းမလှယျကူဖြစ်ကြသည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုဟာလက်ျာကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှင့် ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာရဲ့ CEO, စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာရာထူးအဖြစ်ကို C-အဆင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ အင်တာဗျူးစူပါရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲနေတဲ့က soo လွယ်ကူသောဖူးပါ။ တောင်မှတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်စူပါခဲယဉ်းအလုပ်တခုကိုဖြစ်နိုင်သည် သင်တစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲကြမည်မဟုတ်ကြောင်း။ အထူးသဖြင့် ဥရောပကနေ or အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်အာရှ.
ဒါကြောင့်အတွင်းစတင်နိုင်ရန်အများကြီး သာ. ကောင်း၏ Entry-level ကိုရာထူးအလုပ်အကိုင်။ ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းအလယ်မှာမန်နေဂျာရဲ့အနေအထားကိုအဘို့အရှေ့သို့ရွေ့လျား။ ဒီလမ်း ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ပိုပြီးလုံခြုံပါလိမ့်မည်။ သင်တန်း၏ထိုကဲ့သို့သော Google နဲ့ Facebook မှာအဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်အင်တာဗျူးများဖြစ်စဉ်ကိုရှောက်သွားပြီးနောက်, စကားပြော, သင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဆိုပါက ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းသာအလုပ်အတွက်ခန့်အပ်ထားသော။ သငျသညျအများကြီးပိုပိုက်ဆံစေမည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရတဲ့လူအများစုထဲမှာတည်းခိုအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါသည်, ခဲယဉ်းသည် သူတို့ရာထူးတိုးရမှီတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်.
သို့သော်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ အမြဲပြည်တော်ပြန်အားပေး။ ကျနော်တို့နှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အသငျသညျအကောငျးဆုံးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်နေရာချခံရဖို့ရာပူဇော်သက္ကာချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏ blog post: ကို update ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်၌ဤအတူကျနော်တို့ကြိုးစားနေကြပါတယ် သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပျော်ရွှင် employ ဖြစ်လာဖို့ကိုကူညီ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အတွက်ကိုလည်းကုမ္ပဏီများကမမေ့မလြော့ပါ ဆော်ဒီအာရေဗျကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်း.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်း၌ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။